ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်၌ ရှင်တော်မူသည်
ဓမ္မဟောင်းကာလ၌ ဘုရားသခင်သည် ပညာတော် (၁၀)ပါးကို လူတို့အားပေးခဲ့သည်။ ထိုမျှမက ပရောဖတ်များနှင့် ကျမ်းစာဆရာများနှင့် ဘုရားကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းသော ဘုရင်များကိုလည်းပေးခဲ့သည်။ သို့သော် အခြေအနေအရပ်ရပ်တိုင်း တွင် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေဖို့ လုပ်ဆောင်ရန် လူတို့သည် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
ယခု အချိန်တွင်မူ ဘုရားသခင်၏ လကျာ်တော်ဘက်၌ သူ၏သားတော် လူသား ယေရှုခရစ် ရှိနေသည်။ ထိုသူ ပြုလုပ်သမျှ အရာရာတိုင်း၌ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေသည်။ ယခုအခါ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်၏ဘုန်းကို ထင်ရှားစေခဲ့ပြီး ခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းချီးပေးရန် ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ကြီးစွာသော ကယ်တင်ခြင်း၌ အရာခပ်သိမ်းတို့သည် ဘုန်းထင်ရှားခြင်း ခံရသော ခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ရောက်လာသည်။
ကြီးစွာသော ကယ်တင်ခြင်း၌ အသွင် လက္ခဏာ နှစ်မျိုး ရှိပြီး၊ ရိုးရှင်းသော အကြောင်းအရာ နှစ်ခု ဖြင့် ဖေါ်ပြနိုင်သည်။
(၁) ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်တော်အထဲ၌ ရှိသည်။
(၂) ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်အထဲ၌ ရှိသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်ပြီး ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်တော်အထဲ၌ ရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်ကို လက်ခံတော်မူသည်ကို သိခွင့်ရသည်မှာ အံ့သြဖွယ် ကောင်းလှသည်။ သို့သော် ဤနေရာ၌ ခရစ်ယာန် အသက်တာကို ဘယ်လိုအသက်ရှင် နေထိုင်ရမလဲဆိုသည့် အရာမှာ ကျွန်ုပ်အတွက် ပြသနာ တစ်ခု ဖြစ်နေသည်။
အဖြေမှာ ကျွန်ုပ်၌် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ခရစ်ယာန်အသက်တာကို အသက်မရှင် နိုင်ပေ။ ခရစ်ယာန်အသက်တာကို အသက်ရှင် နေထိုင် နိုင် သူမှာ တစ်ယောက်တည်းသာ ရှိသည်။ ထိုသူကား ခရစ်တော် ကိုယ်တိုင်ပင် ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုက “သင် ငါ့ကို ချစ်ပြီး ငါ့ကို ကျေနပ် နှစ်သက်စေချင်တယ်ဆိုတာ ငါ့သိတယ်။ သို့သော် သင် ခရစ်ယာန် အသက်တာကို သင့်ဘာသာ သင် အသက်မရှင် နိုင်တာလည်း ငါသိတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အထဲ၌ ငါ လာရောက် နေထိုင်မည်”ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောသည်။
ခရစ်ယာန် တစ်ယောက် ဖြစ်လာခြင်းဆိုသည်မှာ ဘာသာရေးကိုင်ရှိုင်းမှု၊ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်နှင့် တူအောင် ကြိုးစားရခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါ။ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခြင်းဆိုသည်မှာ စကြ၀ဠာတစ်ခုလုံး၌ အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးသော “ပုဂ္ဂိုလ်” တစ်ယောက်ကို လက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်အတွင်းတွင် ခရစ်တော် အသက်ရှင်နေပါက ထိုသူသည် ခရစ်ယာန် ဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်သည် သူ၏တပည့်တော်များထံ ပြန်လာမည့်အကြောင်းကို ကတိပေးခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုသည် ဤလောကမှ သူထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်းကို တပည့်တော်တို့အား ပြောသောအခါ တပည့်တော်တို့သည် အလွန်ပင် ၀မ်းနည်း ကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုက “ငါသည် ခမည်းတော်ကိုတောင်း၍ ခမည်းတော်သည် သမ္မာတရားကိုပြေသော ၀ိညာဉ်တော်တည်းဟူသော တပါးသော ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာကို သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်မပြတ် တည်နေစေခြင်းငှာ သင်တို့အားပေးတော်မူမည်။ ထိုဝိညာဉ်တော်ကို လောကီသားတို့သည် မသိ မမြင်သောကြောင့် မခံမယူနိုင်ကြ၊ ထိုဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့နှင့်အတူ တည်နေ၍ သင်တို့၌ ရှိနေတော်မူသောကြောင့် သင်တို့သိရကြ၏” ဟု (ယောဟန် ၁၄း၁၆) တွင်မြွတ်ကြားခဲ့သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရောက်ရှိလာခြင်းဆိုသည်မှာ သခင်ယေရှုသည် ကိုယ်တိုင် သူတို့အတွင်း၌ အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် ရောက်လာ ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက“ ငၝသည် သင်တိုႛကို မိဘမဲူ့ဖစ်စေူခင်းငြၝ စနြ်ႛပစ်မည်မဟုတ်။ သင်တိုႛဆီသိုႛလာဦးမည်”ဟုဆိုသည်။ ထို့ပြင် ပင်တေကုတ္တေပွဲ နေ့ကို ရည်ညွှန်း၍ “ငါသည် ခမည်းတော်၌ ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ သင်တို့ရှိသည် ငါ၌ရှိနေသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ငါသည်သင်တို့၌ ရှိသည်ကို လည်းကောင်း၊ ထိုနေ၌ သင်တို့သည် သိကြရလိမ့် မည်” ဟု ပြောခဲ့သည်။(ယော၊ ၁၄း၂၀)
ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် ရက် (၄၀)အတွင်းတွင် သူ၏တပည့်တော်တို့အား(၁၀)ကြိမ်ထက်မက သခင်ယေရှုသည် ကိုယ်ထင်ရှား ပြခဲ့ သည်။ ဖြစ်ရပ်များတွင် သူသည် တပည့်တော်တို့ကို ကိုယ်ထင်ရှားခြင်း၊ သူသည် တပည့်တော်တို့နှင့် စကားစမြည် ပြောခြင်းနှင့် ပြီးနောက် ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ သည်။
ကိုယ်ထင်ပြခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ? ယေရှုသည် အခြားအသွင်သဏ္ဍာန်တစ်ခုဖြင့် တည်ရှိနေသည်ကို သူ၏ယုံကြည်သူများအား အမှန် အတိုင်း အစဉ် သူ ရှိနေကြောင်းကို သိရန် သူပြုလုပ် ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် တပည့်တော်များ သိသော၊ ချစ်ရသော ယခင်က ယေရှုပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုတွင် သူသည် ဘုန်းတော်ကြွယ်ဝသော၊ အသစ်သော၊ ၀ိညာဏခန္ဓာနှင့် ဘုန်းကြီးခြင်းကို ခံရသော ခရစ်တော် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။ (၁၀)ရက် ကြာပြီးနောက် ပင်တေကုတ္တေပွဲ နေ့တွင် တပည့်တော်တို့သည် အထက် ခန်း တွင်ရှိနေပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အလာကို စောင့်နေကြသည်။ ဘုန်းကြီးခြင်းကိုခံရသော ခရစ်တော်ထံမှ ရုတ်တရက် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော် ကျရောက်လာပြီး သူတို့ရှိနေသော အခန်းတစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံ လိုက်သည်။ တပည့်တော်တို့သည်လည်း သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဖြင့် ပြည့်ဝ ကုန်ကြသည်။
အကြောင်းအရာ နှစ်ခု ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို တပည့်တော်တို့ သိ ခဲ့ကြရသည်။
(၁) သူတို့သိခဲ့၊ ချစ်ခဲ့သော ယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဘုန်းကြီးခြင်းနှင့် ချီးမြှောက်ခြင်း ခံရပြီးဆိုတာ သူတို့ သိ ကြရသည်။
(၂) ယေရှုသည် သူ၏၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် သူတို့၌ နေထိုင်ရန် ပြန်လာပြီဆိုတာ သူတို့သိလိုက်သည်။ သူတို့သည် ခရစ်တော်အထဲ၌ ရှိသည်။ ခရစ်တော်သည် သူတို့အထဲ၌ ရှိသည်။
ခရစ်တော်သည် သူ၏၀ိညာဉ်တော် အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ တည်နေသည်။
“သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ကို သူတို့ထံသို့ စေလွတ်ရန် တပည့်တော်တို့ထံမှ ထွက်ခွာသွားခြင်းက တကယ်ကိုသာ၍ ပိုကောင်း၏” ဟု ခရစ်တော်သည် တပည့်တော်တို့အား မြွက်ဆိုခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့ ပိုကောင်းတာလဲ? ဘာဖြစ်လို့ ပိုကောင်းတာလဲဆိုရင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရောက်လာ ခြင်းဆိုသည်မှာ သခင်ယေရှု ကိုယ်တော်တိုင် သူတို့၌ ကျိန်းဝပ်ရန် ပြန်လာခြင်း ဖြစ်သည်။် သူတို့နှင့် အတူရှိရန် ပြန်လာသော ယခင်မြေကြီးသား ခရစ်တော် မဟုတ်ဘဲ ဘုန်းတော် ထင်ရှားတော်မူသော ခရစ်တော်သည် သူတို့၌ အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် ပြန်လာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာခဲ့စဉ်အခါ သူ၌ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်နှင့် အခွင့်ထူးများကို စွန့်လွှတ်ထားခဲ့သည်။ သို့သော် ကောင်းကင်ဘုန်သို့ ပြန်ကြွသွားသောအခါတွင်မူ သူ၏အခွင့်ထူး အားလုံးကို ဘုရားအဖြစ်နှင့် ပြန်လည်ရယူခဲ့သည်။ ယခုမူကား သူသည် ချီးမြှောက်ခြင်း ခံရသော လူသားတော်ဖြစ်ပြီး၊ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို အုပ်စိုး၍ တန်ခိုးအာနုဘော်ဖြင့် ခမည်းတော်၏ လက်ျာလက်၌ ရှိနေတော်မူသည်။
ယေရှုခရစ်တော်သည် “ ဘုရားဇာတိ၊ လူဇာတိ အပြည့်ရှိသူ” ဖြစ်သည်။ ဘုန်းတော်ထင်ရှားသော လူသားအနေဖြင့် သူသည်၊ ကောင်းကင်ဘုံတွင် အရိုးနှင့် အသားနှင့် ပြည့်စုံသော ဧကန်အမှန် ၀ိညာဏခန္ဓာဖြင့် ရှိနေတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်အနေဖြင့် သူသည်နေရာတိုင်းတွင် ရှိနိုင်သည်။ သူ သည် လောက၌ လူဇာတိအဖြင့် ရှိခဲ့စဉ် သူ့ကိုယုံကြည်သူများနှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် အတူမရှိနိုင်ပေ။ ယခုမူကား ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ရှိနေရုံမက ကျွန်ုပ်တို့အထဲ ၌ အသက်ရှင်နေနိုင်သည်။
ခရစ်တော်သည် ယုံကြည်သူတိုင်း၏အထဲ၌ ရှိနေတော်မူသည်။ ဒါက ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုရင် ယုံကြည်သူတိုင်းဟာ မိမိတို့အဘို့ ခရစ်တော်ကို အပိုင်ရကြသည်။ ကျွန်ုပ်၌ အစဉ်ရှိနေသော၊ ပြည့်စုံကုံလုံသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အနေဖြင့် သူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ အမြဲရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ပြဿနာများနှင့် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ကို သူ့အား ပြောပြနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် ခရစ်တော်သည် အကျွန်ုပ်အထဲ၌ နေရန် လာရပါသနည်း?
ခရစ်တော်ဟာ သူကိုယုံကြည်သူများအတွင်း၌ လာနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲက အချို့ကို ဆွေးနွေးကြည့်ပါမည်။
ဘုရားသခင်ဖြစ်စေချင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာရန် ခရစ်တော် ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ လာရောက်နေထိုင်သည်။ မိမိဘာသာ မိမိဆိုရင် ခရစ်ယာန် အသက် တာကို အသက်ရှင်နိုင်မည် မဟုတ်။ သို့သော် ခရစ်တော်က“ငါလာပြီး သင့်အတွင်း၌ ခရစ်ယာန်အသက်တာကို အသက်ရှင်မည်”ဟု မိန့်မှာခဲ့သည်။
ခရစ်တော်သည် မိမိဘုန်းတော် ထင်ရှားစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်၏ စိတ်နှလုံး အတွင်း၌ နေထိုင်သည်။ ခရစ်တော်သည် သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် တန်ခိုးတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် ပြသသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဤ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိနေသည့်အကြောင်းရင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေရန်နှင့် သူ၏အစွမ်းဖြင့် အသက်တာများကို ပြောင်းလဲစေရန် အခြားသူများကို သက်သေပြရန် ဖြစ်သည်။
ဤကမ္ဘာ၌ သူ၏အလုပ်ကို ဆက်လုပ်နိုင်ရန် ခရစ်တော် ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ ရှင်နေသည်။ စာတန်သည် ကောက်ကျစ် သောသူများကို ခရစ်တော်အား သတ်ရန် လှုံ့ဆော်ပြီးနောက် ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ခရစ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှုကို အဆုံးသတ်နိုင်ပြီဟု စာတန်ထင်နေသည်။ သို့သော် စာတန်အမှားကြီး မှားသွားခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်ကို သေခြင်းမှထမြောက်စေခဲ့ပြီ ကောင်းကင်ဘုံ၌ အမြင့်ဆုံးသော နေရာကို သူ့၌် ချီးမြှောက်တော် မူ ခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သော သူတို့၏ စိတ်နှလုံး အတွင်း၌ နေအံ့သောငှာ ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် သူ ပြန်လာတော် မူသည်။
ယခုအခါတွင် ယုံကြည်သောသူ အယောက်တိုင်းတို့၏ အတွင်း၌ ခရစ်တော်အသက်ရှင်၍ ရှိနေသည်။ စာတန်သည် မြေကြီးပေါ်၌ ခရစ်တော်တစ်ပါးတည်းကိုသာ ရင်ဆိုင်ရမည့်အစား သန်းပေါင်းများစွာသော ခရစ်တော်ကိန်းဝပ်ရာ ယုံကြည်သူတို့နှင့် စာတန်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ခရစ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များအား ဘုရားသခင် ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘုရားသခင်ကို နှစ်သက်ကျေနပ်စေသော အသက်တာမျိုးဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ရန် လိုအပ်သောအရာများကို တန်းစီရေရမည်ဆိုလျှင် အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
စိတ်ကျေနပ် ရောင့်ရဲခြင်းကို ကျွန်ုပ်လိုအပ်၏
အမှန်တကယ်အားဖြင့် အထက်ပါအရာများသာမက အခြားအရာများပါ ကျွန်ုပ်၏ တန်းစီစာရင်းထဲတွင် ပါဝင်နိုင်သည်။ လိုအပ်သည့်အရာများ ကို ကျွန်ုပ်သိချင်မှ သိမည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ် မတွေးမိသည့်အရာ ကျွန်ုပ်၏ လိုအပ်ချက်များကိုပင် ဘုရားသခင်သိတော်မူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏၀ိညာဉ်ရေးရာ လိုအပ်ချက်များကို ဘုရားသခင်ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးသလဲ? ကျွန်ုပ်၌ ရှင်ရန် ခရစ်တော်ကို ကျွန်ုပ်အား ပေးခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်၏၀ိညာဉ်ရေးရာ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးသည်။ အရာအားလုံးကို ဘုရားသခင်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ရသည်။ သို့သော် အခြား ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်သော ယေရှုခရစ်ထံမှ ရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “ကောင်းကင်ဘုံနှင့် ဆိုင်သော အရာတို့၌ ခပ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကို ခရစ်တော်အားဖြင့် ငါတို့အား ပေးသနားတော်မူသော ငါတို့သခင်ယေရှု၏ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိစေတော်မူသနည်း” ဟု ဧဖက် ၁း၎ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဘုရားသခင်၏ လက်ျာလက်တော်ဘက်၌ ထိုင်တော်မူသော သခင်ယေရှုထံမှအရာအားလုံးကိုရရှိကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သိရန် လိုသည်။ ခရစ်တော်ကို ပေးခြင်း ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အစဉ်လိုသောအရာ အရာအားလုံးကို ဘုရားသခင်က ပေးခဲ့ပြီး။ သမ္မာကျမ်းစာက “အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ ဇာတိအဖြစ် တော်၏ ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည်ခရစ်တော်၌ ကိုယ်ထင်ရှား၍ ကျိန်းဝပ်တော်မူ၏” ဟု (ကောလောသဲ ၂း၉,၁၀) တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်၏ဉာဏ်ပညာ ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်ဉာဏ်ပညာ လိုပါက ကျွန်ုပ် သူ့ထံလှည့်ရန် လိုသည်။ ကျွန်ုပ် ဘာလုပ်သင့်သည်ကို သူ သိပြီး သူ ကျွန်ုပ်၌ ရှင်တော်မူသည်။ ကျမ်းစာက “ ထိုနက်နဲ သော အရာ၌ ပညာဘ္ပာ၊ ဥာဏ်ဘ္ပာ႟ြိသမ္တွတိုႛသည် ဝက်ြထားလဵက်႟ြိုက၏။ ”ဟု ဆိုသည်။ (ကော၊ ၂း၃)
ဒါဝိတ်က သခင်ဘုရားသည် ငါ့ဘ၀၏ ခွန်အား ဖြစ်သည်။ ငါမည်သူ့ကို ကြောက်ရမည်နည်း။ ငါ့ထဲ၌ရှိသူသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်သည်။ သူသည် ကောင်း ကင် နှင့် မြေကြီးပေါ်၌ တန်ခိုးအလုံးစုံရှိ သူ ဟု ဆိုထားသည်။ ရှင်ပေါလုကလည်း “ငါ့ကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စေတော်မူသော ခရစ်တော်အားဖြင့် ခပ်သိမ်း သော အရာတို့ကို ငါတက်စွမ်းနိုင်၏” ဟု ဖိ ၄း၁၃ တွင် ဆိုထားသည်။
ချစ်ချင်းမေတ္တာသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်သော ယေရှုခရစ် ဖြစ်သည်။ လူအားလုံးကို ချစ်သောသူမှာ ခရစ်တော် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၌ သူ ရှင်တော်မူပြီး ကျွန်ုပ်၏ချစ်မေတ္တာ ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကျွန်ုပ်တို့၌ ရှိနိုင်သော အရာအားလုံးထက် သာလွန်၍ ကြီးမြတ်သည်။ ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ ဖော်ပြထားသည်ကို ၁ကော(အခန်းကြီး ၁၃)တွင် တွေ့နိုင်သည်။ ဒီအခန်းကြီးကို ဖတ်ပြီး “ချစ်ခြင်းမေတ္တာ” ဟု ရေးထားသည့်နေရာများတွင် “ခရစ်တော်” ဟု အစားထိုးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။
ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်၏ ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာက “ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ငြိမ်သက်ခြင်း ဖြစ်သည်” ဟု ဆိုသည်။ ဤကမ္ဘာမှ ခရစ်တော် ပြန်မကြွမီ ခရစ်တော်သည် တပည့်တော် များကို “ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့၌ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့အား ငါပေး၏။ လောကီသားတို့ပေးသကဲ့သို့ ငါပေးသည်မဟုတ်။ သင်တို့ စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိစေနှင့် (ယော ၁၄း၂၇) မိန့်မှာတွင် ခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းစာက “ခရစ်တော်၌ ၀မ်းမြောက်ကြလော့။ သာ၍၀မ်းမြောက်ကြလော့”ဟုဆိုထားသည်။ အခြေအနေအချိန်အခါအရ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြဲတမ်း ၀မ်းမြောက်နိုင်မည် မဟုတ်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေခံပြီးရွေးနှုတ်တော်မူသော ခရစ်တော်၌မူ ကျွန်ုပ်တို့ အစဉ်မပြတ် ၀မ်းမြောက်နိုင် သည်။
ကျွန်ုပ် ကိုယ်၌ အခြားလူတွေ အပေါ်သို့ သိပ်ပြီးသည်းခံနိုင်မည်မဟုတ်။ သို့သော် ယခုတွင် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ နေအံ့သောငှာလာ၍ ကျွန်ုပ်၏ သည်းခံခြင်း ဖြစ်လာသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် “၀မ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် အရာရာ၌ သည်းခံခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်းအလိုငှါ၊ ဘုန်းကြီး သောတန်ခိုးတော်အတိုင်း ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေရန်” ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဆုတောင်းပေးထားသည်။
ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကျေနပ် ရောင့်ရဲခြင်း ဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်က “ငါသည် ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းသက်သော အသက်ရှင်စေသော မုန့်ဖြစ်၏”ဟု ဆိုသည်။ မုန့်ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကို စိတ်ကျေနပ်မှုပေးပြီး အသက်ရှင်စေသောအရာဖြစ်၏။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ “အသက်မုန့်” ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အ၀ပေးပြီး အသက်ရှင် စေသူ ဖြစ်၏။
သမ္မာကျမ်းစာက ခရစ်တော်သည် “ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်” ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်နှင့်ပြည့် စုံ၍ ဘုရားသခင်၏ လက်ျ်ာ တော်ဘက်၌ ထိုင်နေသူအဖြစ် ခရစ်တော်ကို တွေးကြည့်ပါ။ ထိုတန်ခိုးတော်ကို သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် ရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ် ပေးသည်။ ဤကမ္ဘာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကြုံတွေ့ရသော ဆင်းရဲဒုက္ခများ အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အစွမ်းတန်ခိုးကို ခရစ်တော်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ ရယူနိုင် သည်။
အရာခပ်သိမ်းသည် ခရစ်တော်၌ ရှိသည်။
ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌ ကျွန်ုပ် လိုအပ်သော အရာခပ်သိမ်းသည် ခရစ်တော်၌ ရှိသည်။ မေးခွန်းမှာ မည်ကဲ့သို့ ဤ အရာများကို ဤ နေရာ၌ ကျွန်ုပ် ရနိုင်ပါသနည်း။
အဖြေမှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်ရသည်။ သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော် ဆိုသည်မှာ“ခရစ်တော်၏၀ိညာဉ်”ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၌ရှိသော ထိုဝိညာဉ်သည်လည်း ကျွန်ုပ်ထံ၌ ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်လိုအပ်သမျှအရာအားလုံး ခရစ်တော်ထံ၌ရှိပြီး သူ၏ ၀ိညာဉ်တော်ဖြင့် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံး၌ နေသည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ် ဘ၀သစ်၏ အရင်းအမြစ်၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ခွန်အား ဖြစ်သည်။ တမန်တော် ပေါလုက “ ငါသည် ခရစ်တော်နှင့် အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံပြီ။ သို့သော်လည်း အသက်ရှင်သေး၏။ ထိုသို့ ဆိုသော် ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင် ခရစ်တော်သည် ငါ၌ ရှင်တော်မူ၏။ ကိုယ်ခန္ဓာ၌ ယခုငါရှင်သော အသက်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် တည်၏။ သားတော်သည် ငါ့ကိုချစ်၍ ငါ့အဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စွန့်တော်မူ၏။”ဟု ဆိုသည်။(ဂလာ၊ ၂း၂၀)
ကျွန်ုပ်ဘာသာ ကျွန်ုပ်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်သည် အားနည်းပြီး ကျွန်ုပ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသော အရာများစွာရှိသော အပြစ်ရှိသော ကမ္ဘာ၌ အသက်ရှင် နေရ သည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်ကို စိတ်သက်သာရာ ရစေသော အရာနှစ်ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ် စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် ခရစ်တော်ရှိသောနေရာ၌ သူနှင့်အတူ ကျွန်ုပ် ပေါင်းစည်းသည်။
ခရစ်တော်က ဘယ်မှာလဲ? သူသည်ဘုရားသခင်၏ လက်ျာလက်ဘက်၌ရှိပြီး ကောင်းကင်ပေါ် မြေကြီးပေါ်၌ တန်ခိုးတော်နှင့် ပြည့်စုံသည်။ အကူအညီ လိုအပ်သည့် အခါတိုင်း သူထံမှ တောင်းခံနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ကို ကူညီရန် သူအမြဲတမ်းရှိသည်။
ခရစ်တော်၏ တန်ခိုးတော်သည် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဤ နေရာမှာ ကျွန်ုပ်၌ ရှိသည်။ ခရစ်တော်က “သင်လိုသမျှအရာအားလုံး ငါပေးမည် သို့သော် ထိုအရာများအတွက် ငါ့ကို သင်မှီခိုရမည်” မိန့်မှာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ခရစ်တော်၌ မှီခိုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် ဘ၀ကို“အောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်သူ” တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုက “ငါ့ကိုခွန်အားနှင့် ပြည့်စုံစေတော်မူသော ခရစ်တော် အားဖြင့် ခပ်သိမ်းသော အမှုတို့ကို ငါတက်စွမ်းနိုင်၏” ဟု (ဖိ၊ ၄း၁၃)တွင် ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဘ၀အသက်တာ၌ အထက်ပါ သမ္မာတရားများကို မည်သို့ အသုံးချမည်နည်း။
သင်၏အသက်တာကို ပြောင်းလဲစေမည့် ရိုးရှင်းသော အဆင့်(၃)ဆင့်ရှိသည်။
(၁) သမ္မာတရားကို သိပါ။ (၂) သမ္မာတရားကို ရယူပါ။ (၃) သမ္မာတရားအတိုင်း အသက်ရှင်ပါ။ ဤအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားကြ ပါစို့။
(၁) သမ္မာတရားကို သိပါ။
ယေရှုက “သမ္မာတရားကိုလည်း သိကြသဖြင့်၊ ထိုတရားသည် သင်တို့ကို လွတ်လိမ့်မည်” ဟု ဆိုသည်။ (ယော ၈း၃၂)
သမ္မာတရားဆိုသည်မှာ လူသားယေရှုခရစ်တော်သည် စကြ၀ဋ္ဌာ၏ အရှင်သခင်အဖြစ် ချီးမြှောက်ခြင်းခံရပြီး သူသည် ကျွန်ုပ်အထဲ၌ သူ၏၀ိညာဉ်တော် အားဖြင့် ရှိတော်မူသည်။ ဤနေရာ၌ ခရစ်တော်အတွက် အသက်ရှင်ရန် ကျွန်ုပ် လိုအပ်သည့်အရာ အားလုံး ခရစ်တော်ထံ၌ ရှိသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “ ဘုရားသခင်၏ ဇာတိအဖြစ်တော်၏ ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည် ခရစ်တော်၌ ကိုယ်ထင်ရှား၍ ကျိန်းဝပ်တော်မူ၏။ ထို့ကြောင့်ထိုသခင်၌ သင်တို့သည် စုံလင်လျက်ရှိသည် ”ဟု ရေးသားထားသည်။(ကောလောသဲ၊ ၂း၉,၁၀)
(၂) သမ္မာတရားကို ရယူပါ။
ကျွန်ုပ်၏ ကယ်တင်ရှင် ယေရှုခရစ်သည် ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြီး ဘုရားသခင်၏ လက်ျာလက်တော်ဘက်၌ ချီးမြှောက်ခြင်းခံရသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်၏ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်ရုံမက ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်အသက်တာသစ်၏အရင်းအမြစ်၊ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုနှင့် ခွန်အားဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် သမ္မာတရားကို သိရုံမက ကျွန်ုပ်အပိုင်ဖြစ်စေရန် သမ္မာတရားကို ရယူရမည်။“ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူတို့ အတွင်း၌ ခရစ်တော်ရှိသည်” ဟု သိရုံမဟုတ်ဘဲ “ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ ခရစ်တော်အသက်ရှင်သည်” ကို သိရမည်။ “ခရစ်တော်သည် သူ့ကို ယုံကြည်သူတို့ကို ချစ်သည်” ကို သိရုံမက “ခရစ်တော် ကျွန်ုပ် ကိုချစ်” ကိုသိရမည်။ တမန်တော်ပေါလု သမ္မာတရားကို သူ၏အပိုင် ဖြစ်စေသည်။ သူက “ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ကျွန်ုပ်ကိုချစ်ပြီး ကျွန်ုပ်အတွက် ကိုယ်ကို ကိုယ်စွန့်သည်” ဟုပြောခဲ့သည်။
“ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ ခရစ်တော် အသက်ရှင်သည်” ၏အဓိပ္ပာယ်မှာ “သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့် ရင်းနှီးနွေးထွေးစွာ အချိန်တိုင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်သည့် အခွင့်ထူးမှာ ကျွန်ုပ်၌ရှိသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏လက်ျာလက်တော်ဘက်၌ ထိုင်လျက်ရှိ၏။ အခြားသူများ ကျွန်ုပ်ကို မည်သို့ထင်မြင်မည်ကို ကျွန်ုပ်စိတ်မ၀င်စားပါ။ ခရစ်တော် ကျွန်ုပ်ကို ချစ်သည်။ ကျွန်ုပ်လည်း ခရစ်တော်ကိုချစ်သည်။ သူ့ကို သိခွင့်ရခြင်းသည် ဤကမ္ဘာမှ ပေးသည့် အရာအားလုံးထက် သာလွန်သည်။
(၃) သမ္မာတရားအတိုင်း အသက်ရှင်ပါ။
ဤအရာသည် ဘာကို ဆိုလိုလဲဆိုရင် “ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ရှိသော ခရစ်တော်ကို ကျွန်ုပ် မှီခို အားထားသည်။ သူသည် ဘုရားဖြစ်သည်။ စကြ၀ဠာကို ဖန်ဆင်း သူ မှာ သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် အတွင်း၌ ခရစ်တော်ရှိလျှင် လုံလောက်ပြည့်စုံပြီဟူ၍ ဖြစ်သည်။
စာတန်က “မင်းအောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ခရစ်ယာန် အသက်တာကို မင်းအသက် ရှင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်က “သခင်ယေရှု ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ရှိသည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ အရာအားလုံးအတွက် ကိုယ်တော်၏ကျေးဇူးသည် လုံလောက်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်၌့ ကိုယ်တော်၏အသက်တာကို အသက်ရှင်နိုင်ရန် အကျွန်ုပ် ကိုယ်တော်ကို ကိုးစားပါသည်။
ဘ၀အသက်တာတွင် အောင်မြင်ရန် လျှို့ဝှက်ချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ သခင်ဘုရားနှင့် အချိန်ယူဖို့၊ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လေ့လာရန်နှင့် ဆုတောင်းရန် ဖြစ်သည်။ ဤအရာကို “Quiet Time” ဟု ခေါ်သည်။ “ သခင်ဘုရား၌ မျှော်ကိုးခြင်း” ဟုလည်း ခေါ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “အကယ် စင်စစ် ကိုယ်တော် ကို မျှော်လင့်သော သူတို့သည် ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ မရောက်ကြပါဟု” ဆိုထားသည်။(ဆာ၊ ၂၅း၃)
ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရသော သမ္မာတရား ရတနာ
ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်၌ ရှင်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဇာတိအဖြစ်တော်၏ ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည် ခရစ်တော်၌ ကိုယ်ထင်ရှား၍ ကျိန်းဝပ် တော်မူ ၏။ အကျွန်ုပ် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သော အရာ တစုံတခုအတွက် သူသည် ကျွန်ုပ်အဘို့ လောက်ပေသည်။
မေးခွန်းများ (သင်ခန်းစာ ၁၂ )
အောက်ပါမေးခွန်းတစ်ခုစီအတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေကို ရွေးပါ။
၁။ ကြီးစွာသော ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်း၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာ နှစ်ခုရှိသည်။
(က) ခရစ်တော်အတွင်း၌ ကျွန်ုပ်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ ခရစ်တော်ရှိသည်။
(ခ) ခရစ်တော်ကို ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပြီး ခရစ်တော်လည်း ကျွန်ုပ်ကို ယုံကြည်သည်။
၂။ ပင်တေကုတ္တပွဲနေ့က တပည့်တော်တို့ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် လွှမ်းခြုံခဲ့စဉ် တပည့်တော်တို့သည် အကြောင်းအရာ(၂)ခုကို သိလိုက်သည်။
(က) သခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြီး သူတို့အတွင်း၌ သူ၏၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် နေထိုင်ရန် ပြန်လာသည်။
(ခ) သခင်ယေရှုသည် အသက်ပြန်ရှင်လာပြီး တပည့်တော်တို့နှင့်အတူ နေထိုင်ရန် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ပြန်လာသည်။
၃။ ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခရစ်တော်ပြန်လာခြင်းက ပိုကောင်းရခြင်းမှာ…
(က) သူ၏လူခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် မကြာမှီ တဖန် ပြန်လာမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
(ခ ) လူ့ ဇာတိခရစ်တော်မဟုတ်ဘဲ အလုံးစုံသော တန်ခိုးနှင့်ဘုန်းနှင့် ပြည့်စုံသော ခရစ်တော် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
၄။ “၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ခရစ်တော်လာသည်” ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ
(က) ယုံကြည်သူတိုင်းသည် မိမိတို့အဖို့ အရာအားလုံး ခရစ်တော်ကို ရနိုင်သည်။
(ခ) ခရစ်တော်၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့သောအရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့ ကြောက်ရွံ့စရာ မလိုတော့ပါ။
၅။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်၏ ၀ိညာဉ်ရေးရာ လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
(က) ကျွန်ုပ်၌ ကူညီရန် ဆရာကောင်းများကို ကျွန်ုပ်အားပေးခြင်းဖြင့်။
(ခ) ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ နေထိုင်ရန် ခရစ်တော်ကို စေလွှတ်ခြင်းအားဖြင့်။
၆။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်ဘုံအရပ်မှ ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းချီးပေးသည်။
(ခ) ၀ိညာဉ်ရေးရာ ကောင်းကြီးများ အားလုံးဖြင့်။
၇။ ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သမျှ အရာအားလုံး ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိသည်။ သို့သော် ထိုအရာများကို ဤကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် အသက်ရှင်စဉ် ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
(က) ကောင်းသောခရစ်ယာန် ဖြစ်လာရန် ကျွန်ုပ်၌ ဘုရားသခင် မစရန် ဆုတောင်းလျှောက်ရမည်။
(ခ ) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဖြစ်သည်။
(က)ကျွန်ုပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုတောင်းလျှင် ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိမည်။
(ခ) ဘုရား၏သားတော် ယေရှုခရစ်သည် သူ၏၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် ယခု ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ ရှိသည်။
၉။ သမ္မာတရားကို သိရုံမက…
(က) ကျွန်ုပ် အပိုင်ဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ် တောင်းခံ ရယူရမည်။
(ခ) ပို၍ကောင်းအောင် အသက်ရှင်နိုင်ရန် ပိုကြိုးစားရမည်။
၁၀။ “သမ္မာတရားအတိုင်း အသက်ရှင်သည်” ဆိုသည်မှာ
(က) ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်ရန် ဖြစ်သည်။
(ခ) ကျွန်ုပ်၌ ရှိ ခရစ်တော်ကို အားကိုးအားထား၍ အသက်ရှင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာတွင် သင်သင်ယူခဲ့သည့် အရေးအကြီးဆုံးအရာက ဘယ်အရာဖြစ်သနည်း။